Sawirro: Cali Cabdalla Saalah oo lagu dilay Sanca
Madaxweynihii hore ee dalka Yemen dhowaanahaana isbaheysiga la lahaa kooxda Shiicada Xuuthiyiinta Cali Cabdalla Saalax ayaa goor dhow ku dhintay dagaal ciidamadiisa iyo kuwa Xuuthiyiinta maalmahaanba ka socday gudaha magaalada Sanca.
Kooxda Xuuthiyiinta oo taageero ka hela dalka Iran ayaa waxaa lagusoo waramayaa inay qarxiyeen oo ay bur buriyeen gurigii uu Sanca ka deganaa Cali Cabdalla Saalax ayada oo ay dagaalyahanada Xuuthiyiinta meydkiisa buste ku wareejinayeen gudaha magaalada Sanca.
Xisbigii uu madaxda u ahaa ayaa cadeeyay in Cali Cabdalla Saalax la dilay oo ay kooxaha Xuutiyiinta dileen, sidoo kale waxaa lala dilay kaaliyihii xoghayaha guud ee xisbigiisa iyo weliba taliyihiisii ciidamada.
Dhimashada Saalax ayaa waxa ay dhabarjab weyn ku noqonaysaa Isbaheysiga Sacuudiga uu hogaaminayo oo rajo ka qabay ka goosashada Saalax ee Xuutiyiinta iyo wadahadalkii uu ku baaqay inay soo da dejin lahayd in Xuutiyiinta awoodooda la wiiqo sidaasna ay mar kale ku wada shaqeeyaan Sacuudigaa, Cabdi Rabo Haadi iyo Cali Cabdalla Saalax culeyska badana uu ka dego Sacuudiga oo ku dhiiqooday dagaalka Yemen.
Cali Cabdalla Saalax waxa uu kasoo jeedaa khabiil lagu magacaabo Sanxaan oo ka tirsan beel weynta Haashid kuwaasoo ku abtirsado Shiicada Zaidiyiinta oo ka yara duwan Xuutiyiinta oo ah Shiico xag jir ah.